Galmada wanaagsan | Zanzu
Ma jiraan sharciyo si loo qeexo waxay tahay galmada wanaagsan iyo waxaanay ahayn. Waxay ka duwan tahay qof ilaa ka kale.
Kala hadal lamaanahaaga inta jeer, inta ay leegtahay, meesha iyo sidaad galmada u samayso. Si wada jir ah waxaad ka heli kartaa noloshada galmadda aad labbadiinu xiisaysaan. Haddii ay lama huraan tahay, waxaad la hadli kartaa xirfad yaqaanka caafimaadka.
Sidoo kale ka hadal wax ku saabsan xuduudahaaga. Waa inaadan samayn ama jeclaan wax kasta.
Inta jeer galmadu isbeddesho inta lagu guda jiro xidhiidhka. Wakhtiyada qaarkood, lamaanaha waxay sameeyaan galmo wax badan halkii ay ka ahaan lahayd wakhtiyada kale. Tani waa caadi.
Rabitanka qof kasta ee galmada way kala duwantahay. Rabitaankaaga galmada waxay sidoo kale ka duwanaan kartaa hal maalin ilaa mida kale iyaddoo ku xidhan dareenkaaga, jewiga iyo kicitaankaaga.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Galmada wanaagsan
Falcelin jidhka muddada galmada